Youtube na - ekwughachi - Jiri nwayọ loop vidiyo Youtube - Gee egwu na-enweghị nkwụsị
Loop na Tinyegharịa Youtube vidiyo
Tinyegharịa vidiyo Youtube na-enweghị ịpịgharịa
Lelee vidiyo YouTube n'ụzọ kachasị mfe. Iji YouTube Loop ị nwere ike ikwugharị vidiyo zuru ezu ma ọ bụ họrọ akụkụ ya, chọọ na YouTube, bido vidiyo ọtụtụ n'otu oge!
Chọọ ma ọ bụ mee Youtube Tinyegharịa.
Tinye YouTube vidiyo zuru ezu ma ọ bụ elekere iji YouTube Loop
Youtube Repeater na-enye onye ọ bụla ohere ịgbanye vidiyo YouTube ma ọ bụ akụkụ nke vidiyo oge ya na ole na ole aka ahụ. Kwụghachi egwu vidiyo egwu na-enweghị ngwụcha, ihe nkiri vidio na-atọ ọchị, ma ọ bụ vidiyo ndị dị ka ebe a na-ere ọkụ ma ọ bụ aquariums ma soro ndị enyi gị kerịta ha!
Etu esi etinye vidiyo YouTube na imegharị
Kedu mgbe bara uru YouTube vidiyo na ngwụcha enweghi ngwụcha
∞ Mgbe ị na-ekiri vidiyo YouTube na-enye ọzụzụ ma ịkwesịrị ile akụkụ ya ụfọdụ ugboro ugboro.
∞ Mgbe ị nụrụ egwu nke na-eri ahụ ka ọ ga -ege ntị ugboro ugboro ...
∞ Mgbe ị ga-ekiri ihe nkiri ahụ na-atọ ọchị maka oge 1000 na-enweghị ihe eji eme ya.
∞ Mgbe ịchọrọ ikiri vidiyo YouTube na-enweghị mgbasa ozi.
Youtube Tinyegharịa Button
Nweta bọtịnụ Youtube ugboro ugboro maka Chrome, Firefox, Opera, Safari, Microsoft Edge.
∞ Tinyegharịa Youtube ← Dọrọ nke a na ogwe edokọbara gị
Ọ bụrụ na iji Mac OS X, Pịa Shift+⌘+B
Ma ọ bụ, detuo koodu niile dị n'okpuru ederede ederede wee pịpịa ya na akara ibe edokọbara gị.
❝Ihe odide a na - enyere gị aka ịdekọ vidiyo YouTube na akpaghị aka.❞
Pịa Shift+Ctrl+D. Ọ bụrụ na iji Mac OS X, Pịa Shift+⌘+D
Iji YouTube Loop ị nwere ike
Tinyegharịa, Bee na ukwu
Lelee vidio YouTube niile ma ọ bụ tinye akụkụ ya ugboro ugboro, wee kesaa ndị enyi gị kee ihe gị niile!
Tinyegharịa vidiyo YouTube na akpaghị aka (ma ọ bụ naanị akụkụ nke ha, maka okwu ahụ)
Lelee vidiyo YouTube kachasị amasị gị ugboro ugboro na-enweghị ịpịgharị.
Mkpụrụ, Bee maka ọgaghị agụ
Mepụta Anya, kọọ akụkụ kachasị amasị vidiyo gị wee tinye egwu zuru ezu ma ọ bụ akụkụ nke vidiyo YouTube na akaghị oke.
Hazie oge nke akaghị gị (mbido / njedebe)
Nkwado maka oge YouTube.
Mepụta ndepụta ọkpụkpọ gị na-enweghị nbanye.
Ndabere ma ọ bụ weghachi listi ọkpụkpọ.
Youtube gụgharịa ndepụta ọkpụkpọ egwu, kpoo ma ọ bụ tụgharịa egwu egwu Youtube.
Njikwa zuru oke
Ejikwa vidiyo YouTube a na-ebu.
Na-akpaghị aka na ihuenyo
Lelee Youtube na ihuenyo zuru oke na-enweghị mgbasa ozi na kọmpụta na ama.
Na-akpaghị aka ga-eme ka iru ihuenyo ngwaọrụ ahụ gbanwee
Mee ọsọ ma ọ bụ jiri nwayọ daa
Jiri nwayọ wedata abụ Youtube ma ọ bụ mekwuo vidiyo.
Tinye bọtịnụ egwu na thumbnail.
Gbanwee aha tupu ịkekọrịta.
Ahụmahụ kachasị mma
Chọọ vidiyo YouTube n'ụzọ dị mma.
Enweghị mgbasa ozi na-akpasu iwe.
Na-akwado nyiwe niile kachasị amasị gị
You nwere ike iji YouTube Looper na nyiwe ọ bụla kachasị amasị gị dịka Windows ngwaọrụ, Linux OS, igwe igwe, Chromebook, Android, ma ọ bụ iPhone, iPad, Smart TV.
Ha niile bụ n'efu
Ngwa ngwa na n'efu anaghị ewe iwe.
Ọ bụ kpam kpam na-arụ ọrụ n'ịntanetị iji.
Enweghị akaụntụ, enweghi nbudata, egwu.
Jiri nwayọ lop vidiyo Youtube - Gee egwu n'enweghị nsogbu
Etu esi emegharịa vidiyo YouTube na akpaghị aka
Enwere ụzọ iji gafee gburugburu mgbochi YouTube ọzọ
Chọọ vidiyo kachasị amasị gị ma ọ bụ tinye YouTube URL (ma ọ bụ NJ vidiyo vidiyo) nke vidiyo ịchọrọ ikwugharị na igbe ndenye dị n’elu. Ma ọ bụ jiri Youtube ịmegharịa aghụghọ n'okpuru.
Dochie akwụkwọ ozi t site na leta x na ngalaba Youtube wee pịa Enter. Vidiyo gị ga-ekwugharị na akaghị gaa n'ihu.
- A na - ahụ vidiyo a na - eme na Youtube
Ihe Nlereanya: https://www.youtube.com/watch?v=YbJOTdZBX1g
- Mobile nwere ekwentị
Ihe Nlereanya: https://m.youtube.com/watch?v=YbJOTdZBX1g
- Njikọ obodo (uk, jp, ...)
Ihe Nlereanya: https://uk.youtube.com/watch?v=YbJOTdZBX1g
- URL dị mkpirikpi
Ihe Nlereanya: https://youtu.be/YbJOTdZBX1g
Etu esi eme vidiyo YouTube nke na-egwu n’iru
YouXube na-enye gị ohere ịmepụta Imepụta iji meghachi vidiyo zuru ezu ma ọ bụ otu akụkụ nke otu. Iji mepụta Loop ị nwere ike ịhọrọ vidiyo n’otu n’ime ụzọ ndị a:
Kwụpụ nke mbụ: Họrọ vidiyo
Site na URL
Iji kwugharị vidiyo YouTube, kpatụ URL YouTube vidiyo na mpaghara ọchụchọ.
Site na nsonaazụ ọchụchọ
Ọ bụrụ n ’ejighi n’aka vidiyo ịchọrọ Nchọgharị, ị nwere ike ịchọ vidiyo YouTube. Na peeji na-esonụ, ị ga-ahụ nsonaazụ ọchụchọ nke ị ga - esi n'otu vidiyo kachasị amasị gị.
Nzọụkwụ abụọ: Bee
Lelee vidiyo Youtube n'etiti etiti oge
Họrọ mmalite / njedebe
Ozugbo ịhọrọ vidiyo gị, ịnwere ike ịgbanwe oge mmalite na njedebe. Naanị ịdọrọ mbido mmalite na rụchaa ya n’oge ịchọrọ. Ugbu a ị nwere ike ikwugharị vidiyo YouTube kachasị amasị gị.
Site na ndabara, oge mmalite / imecha bụ oge mmalite / imecha nke vidiyo ahụ.
Nzọụkwụ atọ: Hazie aha vidiyo ahụ
Kpọgharia aha akaghị
Inwekwara ike ịkpọzigharị ihe ọ bụla ịchọrọ. Mepee Igwe echekwara, gbanwee aha ma pịa bọtịnụ Chekwa.
Kwụpụ anọ: Hazie thumbnails video
You nwere ike ịkekọrịta vidiyo vidiyo YouTube gị na mgbasa ozi ọkacha mmasị gị dịka: Facebook, Twitter, Pinterest, email, na WhatsApp ma ọ bụ ozi ederede.
Tupu ekekọrịta, mepụta ihe onyonyo Youtube ọdịnala maka vidiyo gị iji mee ka ndị mmadụ nwee mmasị.
Iji jiri YouTube Loop ị ga-enwerịrị ihe nchọgharị HTML5 dakọtara.
Chọta Ajụjụ Gị na Azịza Gị Ebe a - Kedu Ka E Si Edo vidiyo Youtube?
+ Gịnị bụ YouTube Loop?
Ọ bụ ngwa ọrụ web nke na-egwu vidiyo YouTube na akaghị njedebe, gịnị pụtara: vidiyo ahụ na-amalite ọzọ na akpaghị aka na-enweghị ntinye ọ bụla mgbe ọ mechara njedebe.
+ Etu ikwugharị ma ọ bụ loop vidiyo?
Inweta vidiyo YouTube ka ikwugharị na loop nwere ike iyi ọrụ dị mkpa, mana ọ bụ ihe ịtụnanya na ọ siri ike ma nwee ike ịhapụ ọtụtụ ndị na-ekiri ya iwe.
Ọ dabara nke ọma, enwere ụzọ atọ dị mfe maka ịtọpụ vidiyo egwu YouTube kachasị amasị gị ma ọ bụ ihe nkiri na-adọkpụ, ha niile bụ ndị nweere onwe ha kpamkpam wee rụọ ọrụ na nyiwe niile, gụnyere iPhone na Android smartphones na Windows, Mac, na kọmputa Linux.
• Usoro 1. Na YouTube: pịa aka nke mpio vidiyo ahụ wee pịa Loop
• Usoro 2. Na YouXube:
- Chọọ vidiyo na iji igbe ntinye dị n’elu peeji ahụ, họrọ otu vidiyo site na listi nsonaazụ ahụ.
- Detuo URL nke YouTube vidiyo nke ị ga - achọ ịpị ma tinye URL nke vidiyo YouTube n'ime igbe ndenye n'elu nke ibe ahụ wee pịa akara ngosi infinity. ∞
- Detuo ID nke vidiyo a nke ị ga - achọ idobe ma tinye ID nke vidiyo YouTube n'ime igbe ndenye n'elu nke ibe ahụ wee pịa akara ngosi infinity. ∞
• 3zọ 3: Wụnye ngwa Music Free na iPhone, iPad, ma ọ bụ iPod metụrụ (enwerekwa YouTube ndị na-emegharị ihe maka gam akporo).
+ Etu esi elele vidiyo YouTube site na ihe Nchọgharị Weebụ?
Enwere ụzọ isi lelee vidiyo YouTube na ọsọ ọsọ karịa 2x?
⓵ Ugbu a, YouTube na-eme ọpụpụ vidiyo vidiyo ugboro abụọ.
⓶ Pịa aka ekpe mpaghara vidio ahụ, ma ọ bụ pịa ogologo ma ọ bụrụ na ị na-eji ihuenyo mmetụ aka.
⓷ Họrọ Loop si menu.
Site n'oge a gaa n'ihu, vidiyo ahụ ga-akaghị n'ihu ruo mgbe ị gbanyụọ njiko akaghị, nke ị nwere ike ịme site na ikwugharị usoro ndị dị n'elu iji wepụta nhọrọ loop, ma ọ bụ site na ibe ahụ.
+ Etu esi edobe vidiyo YouTube na iPhone ma ọ bụ iPad na-enweghị itinye ngwa ahụ?
Na desktọpụ ma ọ bụ kọmputa na laptọọpụ, YouTube na-enye gị ohere ịmeghachi vidiyo ị na-elele na-akpaghị aka. Ọzọkwa, enwere ọrụ atọ, nke atọ ga - enyere gị aka ịmegharị vidiyo ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwale ụzọ dị iche nke iji loopt vidiyo YouTube na kọmpụta ma ọ bụ na ị na-eji ngwaọrụ dị ka ama anaghị egosipụta nhọrọ nchịkọta zoro ezo, weebụsaịtị YouXube bụ ezigbo nhọrọ.
YouXube bụ weebụsaịtị nke na-enye mmadụ ọ bụla ịmalite ikwugharị vidiyo YouTube naanị site na ịbanye URL nke vidiyo ahụ n'ọhịa ọchụchọ ya. Nke kachasị mma, enwere ike ịme ihe nchọgharị weebụ ọ bụla na ngwaọrụ ọ bụla.
+ Kedụ ka m ga-esi detuo URL na URL na ngwaọrụ mkpanaka?
Na kọmputa, ịnwere ike iji ụzọ mkpirisi ahụ mepụta njikọ ahụ Ctrl + C ma pinye mkpirisi ahụ na mkpirisi keyboard Ctrl + V.
Na ngwaọrụ mkpanaka, pịa ma jide ma họrọ nke idiri ma ọ bụ Tapawa ahụ.
+ Ndi akwukwo a bu onye ibe YouTube?
Ibe akwukwo a ejighi YouTube.
Saịtị a abụghị onye mmekọ Youtube yana nke a abụghị ụzọ gọọmentị esi egwu vidiyo YouTube ugboro ugboro, ọ bụ naanị ihe ndị ọzọ.
+ Ọ dị mma iji ọrụ imegharị YouTube a?
Nchedo bụ ihe kachasị anyị mkpa, yabụ na ịhe data nke weebụsaịtị a bụ SSL ezochiri. Site na profaịlụ netwọdu echebere a, ndị ọzọ na-echekwa data gị pụọ na ndị ọzọ.
+ Na-akpagharị vidio YouTube, ka ị na-elele ya?
Tinyegharịa ihe nchọgharị gị.
Lelee ojiji CPU nke komputa gi ma obu ekwenti gi. Ọ bụrụ n’ịhụ na ọ dị oke elu (ihe karịrị 80%) nwaa igbu ụfọdụ usoro, ma ọ bụ malitegharịa ngwaọrụ gị.
Ọ bụrụ na ọ ga - ekwe omume ịgbanwee gaa na mma YouTube YouTube (480p ma ọ bụ obere).
+Etu esi lelee vidiyo YouTube na Ntugharị Slow ma ọ bụ ngwa ngwa?
Esi agbanwee ọsọ ọsọ ọkpụkpọ vidiyo na Youtube?
Soro usoro a
Mepee vidiyo YouTube ọ bụla na ihe nchọgharị gị
Lelee anya aka nri nke ihe ọkpụkpọ maka cog ntọala (o nwere ike ịsị HD n’elu ya)
Pịa na nhọrọ ọsọ (ọ kwesịrị ịdị na Nkịtị na ndabara)
Họrọ ọsọ gị na-egwu
Nwee nwayọ: 0.25, 0.5, 0.75
Dịkwuo Gbaa: 1.25, 1.5, 2
N'aka nke ọzọ, ịnwere ike imepe vidiyo ahụ na Youxube, nke nwere bọtịnụ abụọ iji bulie ma ọ bụ ibelata ọsọ na njikwa ahụ.
Nke a bụkwa azịza ụfọdụ ajụjụ ndị yiri ya.
Etu ị ga -eme ọsọ ma ọ bụ gbadaa vidiyo YouTube?
Etu esi ele vidiyo YouTube na ngwa ngwa?
Anyị enwere ike ịnweta mmụba na nhọrọ ọsọ egwu?
Etu esi egwu vidiyo YouTube na Ntugharị Slow ma ọ bụ ngwa ngwa?
+ Etu esi eme vidiyo YouTube (2x, 3x na karịa 4x)?
Ugbu a, YouTube na-eme ọpụpụ vidiyo vidiyo ugboro abụọ.
+ Etu esi agbanwe YouTube Playback YouTube na gam akporo na iPhone?
Tupu anyị ebido, jide n'aka na ị gara na Storelọ Ahịa App ma ọ bụ Google Play ma melite ụdị ngwa YouTube kachasị ọhụrụ.
Mepee vidiyo YouTube ọ bụla na ngwa ahụ
Kpatụ vidio ka ị nwee ike ịhụ bọtịnụ niile ekpuchiri na ihuenyo
Kpatụ ntụpọ 3 ahụ n'akụkụ aka nri nke ihuenyo gị. Nke a ga - emepe ntọala nke vidiyo vidiyo.
N'ime listi ntọala, pịa Pụgharịa egwu. Ekwesịrị ịtọ ya na Nkịtị na ndabara.
Naanị kpachara anya na ọsọ a ịchọrọ, ị ga-etorịrị.
Mgbe ị nọ n’ekwentị gị ma ọ bụ iPhone, ọ bụrụ na ị họrọ ịme vidiyo YouTube na ọkpọ ọkpụkpọ mkpanaka (m.youtube.com) kama iji ngwa ọdịnala nke ala, mgbe ahụ ị nwere ike ịgbanwe ngalaba YouTube wee bụrụ YouXube.
+ Etu esi edobe vidiyo youtube site na otu isi?
Kedu ka ị ga-esi pịa vidiyo Youtube n'etiti etiti oge?
Dọrọ ndị slide na Youtube repeater ka akaghị naanị otu akụkụ vidiyo ahụ.
+ Etu esi edochi Youtube playlist na mobile?
Mepee ndepụta egwu YouTube ọ bụla na ihe nchọgharị gị
Gbanwee ngalaba YouTube bụrụ nke YouXube, ị tọchaala.
Ngwá ọrụ ngbanwe YouTube dị mfe YouTube
Creatmepụta Loop adịbeghị mfe! Na-enyere aka imegharị vidiyo YouTube na akpaghị aka ma ọ bụ akụkụ ya ...
Nyocha ndị ọrụ
Nnukwu ngwa, loops bụ enyemaka kachasị mma maka ịmụ akụkụ abụ iji kpọọ ma ọ bụ bụọ abụ.
Okwu Nkwupụta Asụsụ, London
Ọ bụ naanị ihe m na-achọ ime ka akụkụ egwu dị ka m na-egwu na-eme. Akụkụ nkekọrịta ga-adị mma ịkekọrịta ndị ọzọ vidiyo na ụmụ akwụkwọ / ìgwè ọ bụla.
Onye nkuzi ụlọ akwụkwọ sekọndrị, Paris
M na-eji ngwa a iji mepụta listi ọkpụkpọ maka usoro mmega m. You nwere ike ikwugharị naanị otu egwu ma ọ bụ họrọ akpaaka ga-enyere gị aka ịnụrụ egwu niile dị na listi ọkpụkpọ ahụ. Ngwa ntụkwasị obi.
Nchịkọta Ihe Mgbasa Ozi, Silicon Valley
M hụrụ n'anya otu ị ga - esi kee oghere n'etiti oge ụfọdụ nke vidiyo ahụ! O doro anya na akụkụ kacha amasị m nke ngwa.
Ncha ntutu, Prague
Hụrụ ngwa a n'anya! Na-eme ka ọ dị mfe ịtọpụ egwu kachasị amasị m!
Onye na-ahụ maka ego, Amsterdam
Kpompi ihe m choro. Dịka nwata akwụkwọ egwu, enwere m ike ige egwu abụ m na-achọ ịmụ na loop na-enweghị ịpị egwu ugboro ugboro.
Nwa akwukwo, Madrid
Enwere m mmasị na ọ bụrụ na vidiyo vidiyo dị ogologo karịa ka ịchọrọ, ị nwere ike igbu ya. EGO ANYI MARA. Enweghị eserese ma ọ bụ mgbasa ozi, ahụghị m ihe kpatara ịghara ịhụ ya n'anya.
Nke a bụ nnukwu ngwa na-arụ ọrụ dịka akọwara. Obi dị m ụtọ nke ukwuu na m ga-akwado ya.
Egwú na-atọ m ụtọ ma tinye ha na loop naanị na-eme m afọ ojuju ma na-enyere m aka izu ike.
Onye matraasi, Barcelona
Hụrụ ngwa a n'anya nke ukwuu mgbe ị na - enweghị ike ịchọta ụdị egwu ịchọrọ na YouTube na-ekele gị maka ịme ngwa a.
Onye ọka iwu, Sydney
Ruo ugbu a, nke a bụ ihe m chọrọ ịnọrọ ma mee ụfọdụ guitar.
Ọkachamara akparamaagwa, Rio De Janeiro
Enwere m ekele maka devs nke ngwa a dị oke egwu, n'ụzọ dị mwute YouTube anaghị akwado atụmatụ akaghị mana ekele maka ịme ngwa a.
Kọmputa Architect Kọmputa, San Francisco
Ọ dị mma maka ndị mbido dịka ha nwere ike ịtọ ya ma mụta egwu ahụ ngwa ngwa
Onye ntụgharị okwu, Seville
Ọ na-arụ ọrụ nke ọma maka vidiyo niile abụghị naanị egwu.
Onye njikwa ego, Florence
Ọ na-ekwughachi na-akwụsịghị akwụsị ka m nwee ike hie ụra nke ọma
Ihe eji eme ụgbọ ala, Toronto
Ọ dị mma maka asụsụ nkuzi na ọmụmụ. Enwere m ike ijikwa ọsọ nke egwuregwu ma ọ bụ mkpebi.
Sharingkesa webusaiti a bu ihe ga enyere gi aka na ngwa a ka imuta otutu ihe bara uru
© YouXube 2019 - Onye ọkpụkpọ Youtube 0.0.1